ငတျမပွသေော – My Blog
” ဖွိုးညီရေ…….. ” ချေါသံနဲ့ အတူ အိမျထဲဝငျလာတဲ့ လူနှဈယောကျကို လှမျးကွညျ့လိုကျတော့ မမမှနျတို့လငျမယားဖွဈနသေညျ။ သူတို့လငျမယားနဲ့တောငျမတှတေ့ာ နှဈနှဈလောကျရှိပွီ။ မမမှနျကသူရိနျရဲ့ အဈမ တဈဝမျးကှဲ ၊ ဖွိုးညီ အဖရေဲ့ညီမရဲ့ သမီးအငယျဆုံးဖွဈသညျ။ ဖွိုးညီ အဖတေို့က တရုတျစပျသညျ။ အဒျေါ့ ယောကျြားကလဲ တရုတျဆိုတော့ မမမှနျက ပီဘိတရုတျမလေးတဈယောကျနှယျ။ အရပျမွငျ့မွငျ့ရငျသား တှကေထှားထှား ၊ တငျသားတှကေလဲကွီးသညျ။ ရုပျကလဲ တျောတျောခြောသညျ။ သူ့ယောကျြားဖွဈသူယောကျဖတဈဝမျး ကှဲက ကိုခမျြးသာ တဲ့။ ကားပစ်စညျးတှေ အကွီးအကယျြရောငျး တဲ့သူဌေးသား။ ရုပျကလဲ ခြောသညျ။ ဒီလိုပဲ မမမှနျနဲ့ကွိုကျပွီး လကျထပျကွတာ နှဈ နှဈတောငျကြျောပေါ့။ ဖွိုးညီ အတှေးစတှကေိုဖွတျလိုကျပွီး ဧညျ့သညျနှဈယောကျကိုအိမျထဲချေါလိုကျသညျ။ ”လာ….အကို နဲ့ မမ ဘယျကိုလာတာလဲ။”” ဒီလိုပါပဲ နငျ့အကိုအကွောငျးမသိသေးဘူးလား။ သူတီဘီဖွဈတာလေ နောကျဆုံးအဆငျ့ ဆေးယဉျပါး ရောဂါဖွဈတာ။ ပထမဖွဈတုနျးက ဆေးမှနျမှနျမသောကျတာနဲ့ နောကျပိုငျးဆေးမတိုးတော့ပဲ ဖွဈသှားတာ။ အခုလဲ နမေကောငျးဘူး။
တဈခါတဈခါထထဖောကျသေးတယျ။ သှေးတှအေနျတာမှ မပွောပါနဲ့။ ”ဘေးနားက ယောကျဖတျောကတော့ တဈခကျြသာကွညျ့ပွီး ယဲ့ယဲ့ပွုံးပွသညျ။ အပွုံးကနှမျးလြှနသေညျ။ ဒါနဲ့ မမတို့ ဘာကိစ်စနဲ့လာတာလဲ။ ခဏလေးနျော ။အဖနေဲ့ အမဈေေးခဏသှားတယျ။ ပွနျရောကျတော့မှာပါ ။ မကွာပါဘူး ။ နငျ့ကို ဆေးအကွောငျးလေးမေးခငျြလို့လာတာပါ။ သူလဲဆေးတှေ သောကျနတေော့။ ဆေးဖိုးကလဲ တဈလကိုငါးသိနျးလောကျကုနျတယျဟယျ။ ဘာဆေးတှလေဲဆိုတာရယျ ။နောကျရော အကောငျးအတိုငျးပွနျဖွဈပါ့မလားလို့မေးခငျြလို့။ ဓာတျမှနျကိုကွညျ့လိုကျတော့ အဆုတျတှငျ စပေါ့တှကေ ဇကာပေါကျနှယျ။ အျော……. ပလေိုကျတဲ့ ငါ့ယောကျဖ ။ ဘာလို့ အဲဒီလောကျတောငျဆိုးဝါးသှားပါ့လိမျ့။ ဖွိုးညီ တဈယောကျမခြိတငျကဲပငျတှေးမိလိုကျသေးသညျ။
သို့သျော လူနာတဈယောကျကိုစိတျဓာတျကအြောငျမပွောသငျ့သောကွောငျ့ ” ကောငျးမှာပါ မမ ဆေးကိုပုံမှနျသောကျလေ။ ဒီအစကျအပွောကျတှကေတော့ ပွနျပြောကျတော့မှာမဟုတျဘူး။ ကနျြတာတော့ သူ့ဆေးပတျလညျအောငျသောကျလို့ တီဘီ တှကေုနျသှားရငျ ပြောကျမှာပါ။ နောကျပိုငျးတော့ ဆေးလိပျမသောကျနဲ့ ။ အပငျပနျးမခံနဲ့တော့ပေါ့။ သကျတောငျ့သကျသာပဲနရေမှာပေါ့။”” ဒါတောငျနငျ့အကို က ဆေးလိပျပွနျသောကျခငျြသေးတယျ ။ မနညျးတားထားရတာ ။အရငျထဲက ဖငျမီးခိုးထှကျအောငျသောကျတဲ့လူလေ။ ”ပွောရငျးဆိုရငျး ဖဖေနေဲ့မမေပွေနျရောကျလာလို့ စကားစပွတျသှားသညျ။သူတို့ နှဈယောကျနဲ့ မိဘနှဈပါး စကားကောငျးနကွေသညျ။ အာလ်လာပ သလ်လာပတှကေို ဆကျနားမထောငျခငျြတော့နဲ့ နဲ့ အခနျးထဲဝငျပွီး ညမငျးသားဆိုဒျက ကိုကောငျးခနျ့ရေးထားတဲ့ ”ခှငျ့လှတျတော့မရယျ” အခဈြဝတ်တုဆုရ စာအုပျကိုပဲပွနျဖတျနမေိသညျ။
ဖတျကောငျးကောငျးနဲ့ဖတျလိုကျတာ အခြိနျဘယျလောကျကွာသှားသညျမသိ။ ဧညျ့ခနျးထဲက ”သားရေ ခဏလာဦးပွောစရာရှိလို့ ။ ” အမရေဲ့ ချေါသံကိုကွားလို့ အပွငျကိုထှကျကွညျ့မိသညျ။” သားကိုရနျကုနျထညျ့ပေးလိုကျမလို့ ။ သှားအထုတျသှားပွငျခြေ ။ နလေ့ညျ နငျ့ အဈမတို့ပွနျရငျတဈခါထဲလိုကျသှား နငျကြောငျးပိတျတဲ့ နှဈလ ဒီမှာလဲအားနတောပဲ လတျလြား လတျလြားနဲ့ ဘာမှလဲမဟုတျဘူး ။ဟိုမှာအကူညီလိုနတော သှားကူညီခြေ။ ”ဖွိုးညီလဲ ဖတျလကျစ စာအုပျကိုပိတျလိုကျပွီး အထုတျအပိုးတှပွေငျဆငျနလေိုကျသညျ။ နလေ့ညျထမငျးစားပွီး တော့ အဈမတို့ကားနဲ့ ရနျကုနျလိုကျခဲ့သညျ။
ယောကျဖက ကားတောငျသိပျမမောငျးနိုငျ။ ပဲခူးလာတုနျးကတောငျ အဈမ မောငျးခဲ့တာ ။ အပွနျတော့ ကြှနျတျောမောငျးမယျ မမဆိုပွီးသူကိုယျတိုငျ မောငျးပွီးလာခဲ့လိုကျသညျ။ အိမျက ဖြာပုံလမျး ငါးလှာ ။ ယောကျဖက သုံးလှာ လောကျပဲတကျရသေးသညျ … ဟောဟဲ …ဟောဟဲ ဖွဈနလေို့ သူ့ကိုစောငျ့စောငျ့ပွီးချေါရသညျ။ အပျေါရောကျတော့ ယောကျဖ မောပွီးဖလကျပွသှားသညျ။ အခနျးထဲသှားနားနသေညျ ။ ”မောငျလေးရေ ………. အထုတျတှဝေိုငျးကူထားပါဦး ။ နငျ့အကိုအထုတျကို နငျ့အခနျးထဲထား ။ မမအထုတျကိုတော့ ဒီကိုယူလာခဲ့ ။ ”” မမက အကိုနဲ့တဈခနျးထဲအတူတူအိပျတာမဟုတျဘူးလား” ” နငျ့အကိုဆီကပိုးကူးမှာစိုးလို့ ခှဲအိပျတာ တဈနှဈကြျောလောကျရှိပွီ။ သူကလဲ ဆေးပွငျးတှသေောကျရတော့ ညညဆို တနျးပွီးအိပျပြျောတာပါပဲဟယျ။
လငျမယားကိစ်စလဲသိပျမရှိတော့ပါဘူး။ ” အိမျထောငျကတြာမှ နှဈနှဈလောကျပဲရှိသေးသညျ။ တဈနှဈကြျောလောကျခှဲအိပျရသော မမကိုလဲ သနားမိသညျ။ သို့သျော ဘာစိတျမှ မဖွဈမိပေ။ ဒီလိုနဲ့ မနကျစောစောထတဲ့ သူ့အကငျြ့ကွောငျ့ မနကျစောစောရနှေေးတညျ၊ ထမငျးအိုးတဈလုံးခကျြပွီး ဈေးသှားလိုကျသညျ။ ဈေးကပွနျလာတော့ မမမှနျတဈယောကျရခြေိုးခနျးထဲက ထှကျလာတာနဲ့တနျးတိုးသညျ။ရငျလြှားပျေါမှာတဘကျလေးလှား ထားသညျ။ ”အျော……. မမမှနျ နိုးနပွေီလား။ ကြှနျတျောတောငျဈေးကပွနျလာပွီ ။ ကွကျသားနဲ့ အာလူးရယျ ၊ ကငျပှနျးခဉျြရှကျနဲ့ ပဒတျစာလေးပဲခကျြပွီး ငပိရညျနဲ့ တို့စရာလေး တို့မလို့စီစဉျထားတယျ။” ဖွိုးညီတဈယောကျရေ ပကျမဝငျ စကားတှကေိုဖောဖောသီသီပငျပွောမိသညျ။
” ဒါနဲ့ မမမှနျမကျြနှာမကောငျးပါလား။ ညက အိပျမပြျောလို့လား။ ဘာဖွဈလို့လဲမမရဲ့။”သခြောမေးကွညျ့တော့မှ.. ” ဘာမှမဟုတျပါဘူး။ညက မမမှနျခွဆေဈလကျဆဈတှကေိုကျလို့အိပျလို့မရဘူးလေ။ မိုးအေးတော့ပိုဆိုးတာပေါ့။ ဆရာဝနျကတော့ လေးဘကျနာလို့ပွောတာပဲ။ အဲဒါ မိုးအေးတိုငျးဖွဈနတေော့ စိတျညဈနတောပါ။ ” ” ဒါမြားမမမှနျရယျ ညထဲက ပွောပါလား ။ ကြှနျတျော ဆေးပေးပွီး ကုပေးမှာပေါ့။ ဘာလဲ ကိုယျ့မောငျလေးကို ကြောငျးမပွီးသေးဘူးဆိုပွီးမယုံဘူးလား။ ” ”လာ… ဒီမှာထိုငျ ။ ကြှနျတျောရှငျးပွမယျ။ အဲဒါ …………… လို့ချေါတယျ ။ ဘာမှမဖွဈပါဘူး။ အကိုကျအခဲပြောကျဆေးသောကျပေါ့။” ”နောကျတဈခါဖွဈရငျကြှနျတေျာ့ကိုချေါလေ။ ” ”ကြှနျတျောမနကျစာပွငျထားတယျ။ အကို့ကိုနှိုးလိုကျဦးလေ။ တူတူစားရအောငျ။” ”ရတယျမောငျလေး သူကနမွေငျ့မှထတာ ။ သူ့ကို နှိုးရငျလဲမကွိုကျဘူး။ ”” မောငျလေးနဲ့ မမပဲအရငျစားထားနှငျ့မယျ ။ နောကျမှခကျြပေါ့ ။
ဝီရိယကောငျးနလေိုကျတာနျော။”” ခဏလေး မမအဝတျအစားသှားလဲလိုကျဦးမယျ။ ”ပွောရငျးဆိုရငျးထှကျသှားသော မမမှနျရဲ့ နောကျပိုငျးကို တဈခကျြလှမျးကွညျ့လိုကျမိသညျ။ တငျသားတှကေ ထှားပွီး အယျနသေညျ။ ကာမမှုလဲကောငျးကောငျးမပွုဖွဈတော့ ကမြသှား။ ဒီကွားထဲ အိမျအလုပျတှကေို သူတဈယောကျထဲ ဒိုငျခံလုပျရတော့ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျသလိုဖွဈပွီး ရငျသား ၊ တငျသားတှကေ ကဈြလဈနသေညျ။ နလေ့ညျ အိမျနောကျဖေးမှာဟငျးခကျြရငျး မမမှနျနောကျမှာရောကျတာမသိပဲ လှညျ့လိုကျတော့ ရငျခငျြးအပျသလိုဖွဈသှားပွီး မမမှနျရဲ့ နို့ကွီးတှနေဲ့ ပှတျမိသှားသညျ။ အိစကျ နသေောအတှအေ့ထိကွောငျ့ ကတုနျကရငျတောငျဖွဈသှားသညျ။ မနဲစိတျနှဈပွီး ဟငျးအိုးထဲအာရုံစိုကျလိုကျရသညျ။ နလေ့ညျစာ ဖွိုးညီလကျရာကို ခြီးကြူးကွသညျ။ ဖွိုးညီလဲ နလေ့ညျစာစားပွီး သူ့အခနျးထဲဝငျကာတဈရေးတမောအိပျလိုကျသညျ။
ညနစေောငျးလောကျနိုးတော့ လကေ့ငျြခနျးလုပျသညျ့ အနနေဲ့ ဒိုကျထိုးပွီး ဘောငျးဘီတိုနှငျ့ပငျ ရခြေိုးခနျးထဲဝငျပွီး ရပေနျးအောကျမှာအားရပါးရရခြေိုးလိုကျသညျ။ ညနစောစား ၊ ပွီးတော့ ယောကျဖနဲ့ဘောလုံးပှဲကွညျ့ ။ ပထမပိုငျးပွီးတော့ ယောကျဖက မကွညျ့နိုငျတော့ ။ အားနညျးတာရော ၊ အိပျရေးပကျြမခံနိုငျတာရောကွောငျ့ အိပျတော့မညျပွောသညျ။ မမမှနျက အိပျယာခငျးပေး စောငျခွုံပေးသညျ။ ယောကျဖအိပျသှားပွီးမှ ပွနျထှကျလာသညျ။ ”ငါ့မောငျလေး မအိပျသေးဘူးလား။ မမတော့ အိပျတော့မယျ ။”” ရတယျ မမ ကြှနျတျောက နှဈပှဲဆကျကွညျ့မှာ ။ ၉ခှဲပှဲပွီးရငျ ၁၂နာရီပှဲလာဦးမှာဆိုတော့ ၂နာရီကြျောလောကျမှ အိပျဖွဈမှာ ။ ဂှတျနိုကျနျော မမ။ဒုတိယပှဲကွညျ့ရငျး ပထမပိုငျးအပွီး ခဏနားတော့ ဘောလုံးဂြာနယျဖတျဖို့လိုကျရှာမှ ဂြာနယျက ခွငျးတောငျးထဲထညျ့လိုကျမိမှနျးသိသညျ။ဒီကိုလာတုနျးက အထုတျမဆနျ့တာ နဲ့ ခွငျးတောငျးထဲထညျ့ထားတာ ။ ခွငျးတောငျးက မမမှနျအခနျးထဲမှာ ။ မထူးပါဘူးလေ ဘယျသူမှမ မဟုတျတာ ကိုယျ့အဈမပဲ ဆိုပွီး အခနျးထဲဝငျလိုကျသညျ။
နိုးသှားမှာကွောကျလို့ ခွဖှေနငျးပွီး အခနျးထဲဝငျ ၊ ကုတငျအောကျက ခွငျးတောငျးကို ငုံ့ယူနစေဉျ”မောငျလေး ဘောလုံးပှဲပွီးပွီလား။”” အျော မမ မအိပျသေးပဲကို ၊ မပွီးသေးဘူးမမ ။ ပထမပိုငျးပွီးပွီ ပငျြးနလေို့ ဘောလုံးဂြာနယျဖတျမလို့ဟာဘောလုံးဂြာနယျကခွငျးတောငျးထဲပါသှားလို့ လာယူတာ။”” မမ မအိပျသေးဘူးလား ။”” ဘာလို့မအိပျတာလဲ ။အဆဈအမွဈတှကေိုကျပွနျပွီငါ့မောငျရယျ။ လကျဆဈခွဆေဈတှကေိုကျနတော။” ”အျော….. ဒါလေးမြားမမရယျ ။ ကြှနျတေျာ့ဆီမှာဆေးပါလာတယျ ခဏစောငျ့။ ”အခနျးထဲပွနျပွီး အသငျ့ရှိနတေဲ့ အစာအိမျမထိတဲ့ အကိုကျအခဲပြောကျဆေးကိုပဲ …… လေးနဲ့တှဲပွီးပေးလိုကျသညျ။ဆေးတိုကျပွီးတော့ ”မမ..လကျဆဈတှကေိုကျနတေယျဆိုရငျ ကြှနျတျောနှိပျပေးရဦးမလား။””အငျး နှိပျပေးလေ ။ ကောငျးတာပေါ့ ငါ့မောငျရယျ။ မမကတော့ အရမျးကိုကျတာပဲသိတယျ။ ”ဖွိုးညီ တဈယောကျမမမှနျရဲ့ လကျဆဈတှကေိုစိတျပါလကျပါနဲ့ နှိပျပေးနမေိသညျ။ လကျခြောငျးလေးတှကေ သှယျလြှနသေညျ။ ဖော့ဖယောငျးလိုနူးညံ့နသေညျ။ ကုတငျက နံရံကပျထားတာဆိုတော့ နံရံဘကျနှငျ့ ဝေးသညျ့ ဒီဘကျလကျကို နှိပျပေးတုနျးက ဘာမှမဖွဈ။
ဟိုဘကျလကျကို ကတြော့ မမက သူ့ရငျဘတျပျေါတငျပေးထားသညျ။ လကျကိုနှိပျရငျး တဈခကျြတဈခကျြရငျသားကွီးတှကေို ထိမိတော့ ။ အိစကျသညျ့အထိအတှကွေ့ောငျ့ အောကျကညီတျောမောငျက ခေါငျးထောငျခငျြလာသညျ။ ပုဆိုးပဲဝတျထားတာရယျ ။ ညဘကျအိပျခါနီးဆိုတော့အတှငျးခံဘောငျးဘီကဝတျမထား တော့ ပုဆိုးအောကျမှာငေါထှကျနသေညျ။ မမှနျကတော့ မသိလောကျ။ ခဏကွာတော့ ”ရပွီငါ့မောငျ လကျကတော့ တျောတျောလေးသကျသာသှားပွီ။ ခွဆေဈလေးတှနှေိပျပေးဦး။ ဒူးခေါငျးရောပဲ။”ဖွိုးညီ ခွခြေောငျးလေးတှကေို ညငျညငျသာသာ နှိပျပေးသညျ။ ကော့လိုကျ ကုတျလိုကျခြိုးပေးသညျ။ အဆဈလေး တှပေျေါမှာလကျနဲ့ဖိပေးသညျခွရေငျးကနအေပျေါကိုမော့ကွညျ့ တော့အောကျခံမဝတျထားတဲ့ညဝတျအကီင်္ပြျေါမှာနို့သီးခေါငျး လေးတှကေိုမွငျလိုကျရတော့အာခေါငျတှတေောငျခွောကျလာ သညျ။
ခဏနတေော့ မမက အပျေါကိုဆှဲတငျပွီး ” ဒူးခေါငျးလေးပဲနောကျဆုံးနှိပျပေးတော့ ငါ့မောငျရေ။ မောငျလေးလဲတျောတျောညောငျးနတေော့မယျ။ မမ လဲဆေးသောကျလိုကျတော့ တျောတျောကောငျးသှားတယျ။”ဒူးခေါငျးကို နှိပျပေးရငျး ခွသေလုံးသားဖွူဖွူလေးတှကေိုကွညျ့ပွီး စိတျမထိနျးနိုငျတော့။ ထမိနျကို အသာဆှဲလှနျပွီး အဖုတျကွီးကို ကုနျးလကျြလိုကျသညျ။” အာ…… ငါ့မောငျ ဘာလုပျတာလဲကှယျ။ မတျောပါဘူး။”မတျောပါဘူးသာပွောနတော အဖုတျထဲမှာ အရညျတှရှေဲနသေညျ။ အရညျကွညျလေးတှကေိုလြှာကွီး နဲ့ တဈခါထဲ သိမျးကွုံး လကျြလိုကျသညျ။အဖုတျနှုတျခမျးသား နှဈလှာကို နှုတျခမျးနဲ့ စုငုံပွီး ခြိုခဉျြစုတျသလို ဆှဲစုတျလိုကျသညျ။” ရှုး……….. အား………….ကောငျးလိုကျတာငါ့မောငျရယျ။ ဘယျလိုမြားလုပျလိုကျတာလဲ။ ” မမမှနျတဈယောကျ ကော့ပွနျနသေညျ ။ ခါးကော့ပွီး အဖုတျကွီးကို ကော့ပေးသညျ။
အဖုတျကွီးကို ဖွိုးညီမကျြနှာနှငျ့ကပျပေးသညျ။ အစလေ့ေးကို ဆှဲစုတျပေးသညျ။ အဖုတျနှုတျခမျးနှဈလှာကို ဖွဲပွီး ပနျးရောငျ အတှငျးနံရံထဲကို လြှာကိုခေါကျကာပို့လှတျလိုကျသညျ။ ” အ…..အ……. နာနာလေးလြှကျ….. ကောငျးလိုကျတာ…. ”အစကေို့ စုတျလိုကျ၊ လြှာနဲ့ထိုးမှလေိုကျ၊ အဖုတျနှုတျခမျးနဲ့ ဖွိုးညီနှုတျခမျး တပွေီ့းစုတျလိုကျ လုပျနတေုနျး မမမှနျ လကျနှဈဖကျက ဖွိုးညီလကျနှဈဖကျကိုယူပွီး သူ့နို့အုံပျေါမှာတငျပေးသညျ။ တငျးအိပွီးနူးညံ့နတေဲ့ နို့ကွီးနှဈလုံးကို ညဝတျအကြီင်ျပျေါကပဲ နာနာနယျမိသညျ။” ညှဈ နာနာ ညှဈ ကောငျးနပွေီ ။ ကောငျးလိုကျတာ။ အောကျကလဲ ပွီးတော့မယျ..။ ””အား …… အား……….. ပွီးပွီ ပွီးပွီ …။ ”ခါးလေးကိုကော့ ပွီး အရညျတှေ ဒလဟော ထှကျကာ ပွီးသှားသညျ။ ဖွိုးညီမကျြနှာမှာလဲ အရညျတှလေူးနသေညျ။ ထှကျလာတဲ့ အရညျတှတေဈခါထဲမြိုခြ လိုကျသညျ။ မမမှနျအရညျက အခဉျြဓာတျမမြား ။ အနညျးငယျ ငနျသညျ့ဘကျကဲသညျ။ သိပျမခဉျြဘူးဆိုတော့ အကျဆဈဓာတျနညျးတယျ ။ PH နိမျ့မှာပေါ့ ။ ဖွိုးညီ စိတျထဲကပငျ စောကျရညျကို ဓာတျခှဲကွညျ့မိသညျ။စိတျကူးနလေို့ မပွီးသေး ။
အလုပျဖွဈအောငျလုပျရဦးမယျဆိုပွီး ပုဆိုးကိုတဈခါထဲ ဆှဲခြှတျလိုကျသညျ။ အောကျက စောငျ့ဆိုငျးနတေဲ့ ညီတောငျမောငျက ဘှားကနဲ ထှကျလာသညျ။ မမမှနျကတော့ လြှာနဲ့တငျ တဈခြီပွီးသှားလို့ မကျြလုံးလေးမှေးနသေညျ။ ဖွိုးညီ ဒူးထောကျကာ ထောကျကာနဲ့ ခေါငျးရငျးဘကျကိုသှားလိုကျသညျ။ ညီတျောမောငျကို ပါးစပျနားလေးကပျပွီး ။ မမမှနျ…. လို့ညငျညငျသာသာချေါလိုကျသညျ။ မမမှနျ မကျြလုံးဖှငျ့ ကွညျ့လိုကျတော့ ပါးစပျနားမှာ တရမျးရမျးဖွဈနတေဲ့ ညီတျောမောငျကိုတှပွေီ့း မကျြလုံးလေးဝိုငျးသှားသညျ။” အာ …… အကွီးကွီးပဲ ။ နငျ့အကိုဟာ အဲလောကျမကွီးဘူး။”” ကြှနျတျောက အဆောငျမှာပငျြးနတောနဲ့ အားအားရှိ ပနျ့ဆှဲထားတာလေ။ အဲဒါကွောငျ့ပါ။ ””ကြှနျတေျာ့ကိုလဲ တဈလှညျ့လုပျပေးပါဦးမမရယျ။ ”စကားဆုံးတော့ လကျလေးတဈဖကျကိုကွှပွီးညီတျောမောငျကိုလှမျးကိုငျလိုကျသညျ။ ခေါငျးလေးကိုကွှပွီး ဒဈထိပျဖြားလေးကိုငုံသညျ။
ဒဈတဈခုလုံးပါးစပျထဲတှငျထညျ့ပွီး လြှာလေးနဲ့လှညျ့ပတျကစားသညျ။ ဒဈအနားသားလေးတှကေို လကျြသညျ။ နောကျ ခေါငျးကိုကွှပွီး လီးတဈဝကျလောကျထိရောကျအောငျငုံပွီး ကွှကာကွှကာနဲ့ မှုတျပေးသညျ။ လီးပတျလညျကို လြှာလေးနဲ့ ရခေဲခြောငျးလကျြသလို လကျြသညျ။ အရမျးကောငျးတာကွောငျ့ ဖွိုးညီ တဈယောကျပွီးခငျြခငျြပငျဖွဈသှားသညျ။” ကဲ မမ ရပွီ။ လုပျတော့မယျ ။””ပေါငျလေးကိုနညျးနညျးကားပွီး ဒူးထောငျပေးနျော။”ဖွိုးညီ ထောငျထားတဲ့ ဒူးနှဈလုံးကွားတှငျ ဒူးထောကျပွီးနရောယူလိုကျသညျ။ အဖုတျဝ တှငျလီးကိုတပွေီ့းခကျြခငျြးမထညျ့သေးပဲ အဖုတျအကှဲကွောငျးတဈလြှောကျပှတျပေးလိုကျတော့ မမမှနျတဈယောကျကော့တကျသှားသညျ။” အ…… လုပျပါတော့ ငါ့မောငျရယျ ။ မမစိတျတှပွေနျကွှလာပွနျပွီ။’မမမှနျ ဒါဆိုထညျ့လိုကျတော့မယျနျော။အငျးထညျ့လိုကျတော့။ဖွိုးညီ သူ့လီးကွီးကိုဖွညျးဖွညျးခငျြးထိုးထညျ့လိုကျသညျ။ မလုပျတာကွာတော့ အပေါကျက တျောတျောကပျြနသေညျ။
ဖွိုးညီ အားနညျးနညျးစိုကျပွီး ဖိထိုးလိုကျတော့ မမမှနျဆီမှ ညညျးသံ နညျးနညျးထှကျလာသညျ။”မောငျလေး ဖွညျးဖွညျးလုပျပါနျော ။ မမကမလုပျဖွဈတာကွာပွီ။””ဟုတျကဲ့ မမ။ ”ဒဈဝငျပွီးသှားတော့ တဖွညျးဖွညျးနဲ့ ဆကျထိုးထညျ့လိုကျတာ တဈဝကျလောကျဝငျသှားသညျ။ အပွငျမှာသုံးလကျမလောကျသာကနျြတော့သညျ။ ကနျြတဲ့ သုံးလကျမကို အဆုံးထိဆောငျ့ထညျ့လိုကျသညျ။”ဒုတျ……. လီးထိပျ နဲ့ သားအိမျခေါငျးသှားဆောငျ့သညျ။” ”အား ……. နာတယျ မောငျလေး ဖွညျးဖွညျးလုပျ။” ”ဟုတျ …… မမ”ဖွိုးညီ တဈဝကျလောကျပွနျထညျ့လိုကျ ထုတျလိုကျနဲ့ အသားကသြှားအောငျ ဖွညျးဖွညျးခငျြးလုပျနမေိသညျ။ ၁၀ခကျြလောကျလုပျပွီးသှားတော့ အသှငျးအထုတျကို နညျးနညျးအရှိနျမွငျ့လိုကျသည”အ…. အ…… ကောငျးတယျ မောငျလေး လုပျလုပျ”” ဗွှတျ ….ဗွှတျ ….. ဖှတျ ….ဖှတျ ……. ဖပျ ………. ဖပျ……….”အဖုတျထဲက အရညျတှနေဲ့ လီးအသှငျးအထုတျလုပျတဲ့ အသံတှေ ဆူညံနသေညျ။တျောသေးတာပေါ့။ တိုကျခနျးက အသံလုံလို့ ။
ဖွိုးညီစိတျထဲက တှေးမိသညျ။ပွီးတော့ ကိုယျ့ အဈမ တဈဝမျးကှဲတဈယောကျကို ပယျပယျနယျနယျ လိုးနရေပါလားဆိုတဲ့ အသိက အသဈအဆနျးတဈမြိုး ဖွဈစသေညျ။” ဖပျ ……. ဖပျ …………. ဖပျ …………ဖပျ………….”ဖွိုးညီ ဥ နဲ့ မမမှနျဖငျနဲ့ရိုကျသံတှဆေူညံ နသေညျ။အဖုတျကတငျးကပျြစီးပိုငျနပွေီး လီးကိုသားရကှေငျးနဲ့ ဆုတျညှဈထားသလို ခံစားရသညျ။စိတျထဲတျောတျောကောငျးလာသောကွောငျ့ နို့ကိုဆှဲရငျးနာနာဆောငျ့လိုးလိုကျတာ ကွာကွာ မလိုးလိုကျရ ခဏနဲ့ပွီးခငျြလာသညျ။ ကှနျဒုံးလဲမပါသောကွောငျ့ လီးကိုအပွငျကိုပဲဆှဲထုတျလိုကျပွီး သုကျရညျတှကေို ဗိုကျပျေါပဲပနျးခလြိုကျသညျ။” အား……….. ရှုး……….. ကောငျးလိုကျတာမမရယျ…..” ဖွိုးညီ မမမှနျရဲ့ နှုတျခမျးသားလေးကို မွတျမွတျနိုးနိုးပဲ နမျးလိုကျသညျ။ခဏနတေော့ မမမှနျဆီကမှတျသိပျသော အနမျးတှေ ပွနျလညျရရှိသညျ။
” ဒီလိုမြိုးမနရေတာကွာပွီငါ့မောငျရယျ……….. အခုလိုလုပျမိတာ မကောငျးပမေဲ့ မမရဲ့ ဆန်ဒ ပွညျ့ဝအောငျလုပျပေးတဲ့အတှကျကြေးဇူးပါ။””မမဆန်ဒပွညျ့ပမေဲ့ ကြှနျတေျာ့ ဆန်ဒ မပွညျ့သေးဘူးမမရယျ ။ ကြှနျတျောလုပျလို့မဝသေးဘူး။” ”ဟုတျလား ….. လုပျဦးမလို့….. လား…”စကားဆုံးခငျမကျြလုံးကပေါငျကွားထဲကလီးကွီးကိုတှေ့ ပွီး စကားတဈပိုငျးတဈစနဲ့ပငျရပျသှားသညျ။ ” အို……. တောငျနတေုနျးပဲ။ မငျးကလဲကှာ ။”” လုပျပါမမရယျ ။ လာ …. လေးဘကျထောကျပွီးဖငျကုနျးပေး။”ကိုခမျြးသာနဲ့ တုနျးက ပုံစံမြိုးစုံနဲ့ လုပျခဲ့ဖူးသောကွောငျ့ သိပျပွဿနာမရှိ ။ ဖွိုးညီပွောတဲ့ပုံစံအတိုငျးပငျ သခြောကုနျးပေးလိုကျသညျ။ခါးကိုကော့ပွီးဖငျကိုသခြောကုနျးပေးထားသောကွောငျ့ ကွီးမားဖွူဖှေးသညျ့ ဖငျကွီး နှဈလုံးအောကျက အဖုတျကွီးက ပွူးထှကျလာသညျ။ဖငျကွားထဲပွူးထှကျနသေညျ့ အဖုတျကွီးကိုကွညျ့ရငျးဖွိုးညီတဈယောကျစိတျတှဆေူဝလောပွီး အဖုတျကွီးကို သကွားလုံးစုတျသလို ပွှတျ ခနဲ ငုံပွီးကုနျးစုတျလိုကျသညျ။
အား………. ကောငျးတယျ ……. ခပျကွမျးကွမျးလေး စုတျပေး”သုံးလေးခကျြလောကျ စုတျပွီးတော့ ဖွိုးညီ သူ့လီးကို မမမှနျအဖုတျဝမှာတပွေီ့း လကျတဈဖကျက ဖငျကိုကိုငျ နောကျတဈဖကျကခါးကိုကိုငျပွီး တဈခါထဲ တဈဆုံးသှငျးလိုကျသညျ။လီးကရှညျသညျ့အပွငျ ဖငျကုနျးထားသောကွောငျ့ တဈခါထဲနဲ့ သားအိမျခေါငျးကိုသှား တိုကျသညျ။”ဒုတျ ………. အ ……… ” မမမှနျ ဆီကအသံထှကျလာသညျ။”မောငျလေး နာနာဆောငျ့တော့ ။ မမမှနျခံခငျြနပွေီ။ အတှငျးထဲထိမဆောငျ့နဲ့ ဗိုကျထဲကအောငျ့တယျ။” ” အပွငျနားတငျနာနာဆောငျ့ ။”ဖွိုးညီလဲ မမမှနျရဲ့ အယျနတေဲ့ဖငျကွီးနှဈလုံးကို အကအြနကိုငျပွီး နာနာပငျဆောငျ့လိုးတော့သညျ။ဗှတျ ……. ဗှတျ ………. ဘှတျ ……. ဘှတျ……………..အား…………ကောငျးတယျ ……. မောငျလေးဆောငျ့ …. သွျော ….. သောကျလေ သောကျလေ ငတျမပွပေေါ့ အားလုံးဘဲ ရှငျလနျးခမျြးမွကွေ့ပါစေ …. ပွီးပါပွီ။
” ဖြိုးညီရေ…….. ” ခေါ်သံနဲ့ အတူ အိမ်ထဲဝင်လာတဲ့ လူနှစ်ယောက်ကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ မမမွန်တို့လင်မယားဖြစ်နေသည်။ သူတို့လင်မယားနဲ့တောင်မတွေ့တာ နှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီ။ မမမွန်ကသူရိန်ရဲ့ အစ်မ တစ်ဝမ်းကွဲ ၊ ဖြိုးညီ အဖေရဲ့ညီမရဲ့ သမီးအငယ်ဆုံးဖြစ်သည်။ ဖြိုးညီ အဖေတို့က တရုတ်စပ်သည်။ အဒေါ့် ယောကျာ်းကလဲ တရုတ်ဆိုတော့ မမမွန်က ပီဘိတရုတ်မလေးတစ်ယောက်နှယ်။ အရပ်မြင့်မြင့်ရင်သား တွေကထွားထွား ၊ တင်သားတွေကလဲကြီးသည်။ ရုပ်ကလဲ တော်တော်ချောသည်။ သူ့ယောက်ျားဖြစ်သူယောက်ဖတစ်ဝမ်း ကွဲက ကိုချမ်းသာ တဲ့။ ကားပစ္စည်းတွေ အကြီးအကျယ်ရောင်း တဲ့သူဌေးသား။ ရုပ်ကလဲ ချောသည်။ ဒီလိုပဲ မမမွန်နဲ့ကြိုက်ပြီး လက်ထပ်ကြတာ နှစ် နှစ်တောင်ကျော်ပေါ့။ ဖြိုးညီ အတွေးစတွေကိုဖြတ်လိုက်ပြီး ဧည့်သည်နှစ်ယောက်ကိုအိမ်ထဲခေါ်လိုက်သည်။ ”လာ….အကို နဲ့ မမ ဘယ်ကိုလာတာလဲ။”” ဒီလိုပါပဲ နင့်အကိုအကြောင်းမသိသေးဘူးလား။ သူတီဘီဖြစ်တာလေ နောက်ဆုံးအဆင့် ဆေးယဉ်ပါး ရောဂါဖြစ်တာ။ ပထမဖြစ်တုန်းက ဆေးမှန်မှန်မသောက်တာနဲ့ နောက်ပိုင်းဆေးမတိုးတော့ပဲ ဖြစ်သွားတာ။ အခုလဲ နေမကောင်းဘူး။
တစ်ခါတစ်ခါထထဖောက်သေးတယ်။ သွေးတွေအန်တာမှ မပြောပါနဲ့။ ”ဘေးနားက ယောက်ဖတော်ကတော့ တစ်ချက်သာကြည့်ပြီး ယဲ့ယဲ့ပြုံးပြသည်။ အပြုံးကနွမ်းလျှနေသည်။ ဒါနဲ့ မမတို့ ဘာကိစ္စနဲ့လာတာလဲ။ ခဏလေးနော် ။အဖေနဲ့ အမေဈေးခဏသွားတယ်။ ပြန်ရောက်တော့မှာပါ ။ မကြာပါဘူး ။ နင့်ကို ဆေးအကြောင်းလေးမေးချင်လို့လာတာပါ။ သူလဲဆေးတွေ သောက်နေတော့။ ဆေးဖိုးကလဲ တစ်လကိုငါးသိန်းလောက်ကုန်တယ်ဟယ်။ ဘာဆေးတွေလဲဆိုတာရယ် ။နောက်ရော အကောင်းအတိုင်းပြန်ဖြစ်ပါ့မလားလို့မေးချင်လို့။ ဓာတ်မှန်ကိုကြည့်လိုက်တော့ အဆုတ်တွင် စပေါ့တွေက ဇကာပေါက်နှယ်။ အော်……. ပေလိုက်တဲ့ ငါ့ယောက်ဖ ။ ဘာလို့ အဲဒီလောက်တောင်ဆိုးဝါးသွားပါ့လိမ့်။ ဖြိုးညီ တစ်ယောက်မချိတင်ကဲပင်တွေးမိလိုက်သေးသည်။
သို့သော် လူနာတစ်ယောက်ကိုစိတ်ဓာတ်ကျအောင်မပြောသင့်သောကြောင့် ” ကောင်းမှာပါ မမ ဆေးကိုပုံမှန်သောက်လေ။ ဒီအစက်အပြောက်တွေကတော့ ပြန်ပျောက်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ ကျန်တာတော့ သူ့ဆေးပတ်လည်အောင်သောက်လို့ တီဘီ တွေကုန်သွားရင် ပျောက်မှာပါ။ နောက်ပိုင်းတော့ ဆေးလိပ်မသောက်နဲ့ ။ အပင်ပန်းမခံနဲ့တော့ပေါ့။ သက်တောင့်သက်သာပဲနေရမှာပေါ့။”” ဒါတောင်နင့်အကို က ဆေးလိပ်ပြန်သောက်ချင်သေးတယ် ။ မနည်းတားထားရတာ ။အရင်ထဲက ဖင်မီးခိုးထွက်အောင်သောက်တဲ့လူလေ။ ”ပြောရင်းဆိုရင်း ဖေဖေနဲ့မေမေပြန်ရောက်လာလို့ စကားစပြတ်သွားသည်။သူတို့ နှစ်ယောက်နဲ့ မိဘနှစ်ပါး စကားကောင်းနေကြသည်။ အာလ္လာပ သလ္လာပတွေကို ဆက်နားမထောင်ချင်တော့နဲ့ နဲ့ အခန်းထဲဝင်ပြီး ညမင်းသားဆိုဒ်က ကိုကောင်းခန့်ရေးထားတဲ့ ”ခွင့်လွှတ်တော့မရယ်” အချစ်ဝတ္တုဆုရ စာအုပ်ကိုပဲပြန်ဖတ်နေမိသည်။
ဖတ်ကောင်းကောင်းနဲ့ဖတ်လိုက်တာ အချိန်ဘယ်လောက်ကြာသွားသည်မသိ။ ဧည့်ခန်းထဲက ”သားရေ ခဏလာဦးပြောစရာရှိလို့ ။ ” အမေရဲ့ ခေါ်သံကိုကြားလို့ အပြင်ကိုထွက်ကြည့်မိသည်။” သားကိုရန်ကုန်ထည့်ပေးလိုက်မလို့ ။ သွားအထုတ်သွားပြင်ချေ ။ နေ့လည် နင့် အစ်မတို့ပြန်ရင်တစ်ခါထဲလိုက်သွား နင်ကျောင်းပိတ်တဲ့ နှစ်လ ဒီမှာလဲအားနေတာပဲ လတ်လျား လတ်လျားနဲ့ ဘာမှလဲမဟုတ်ဘူး ။ဟိုမှာအကူညီလိုနေတာ သွားကူညီချေ။ ”ဖြိုးညီလဲ ဖတ်လက်စ စာအုပ်ကိုပိတ်လိုက်ပြီး အထုတ်အပိုးတွေပြင်ဆင်နေလိုက်သည်။ နေ့လည်ထမင်းစားပြီး တော့ အစ်မတို့ကားနဲ့ ရန်ကုန်လိုက်ခဲ့သည်။
ယောက်ဖက ကားတောင်သိပ်မမောင်းနိုင်။ ပဲခူးလာတုန်းကတောင် အစ်မ မောင်းခဲ့တာ ။ အပြန်တော့ ကျွန်တော်မောင်းမယ် မမဆိုပြီးသူကိုယ်တိုင် မောင်းပြီးလာခဲ့လိုက်သည်။ အိမ်က ဖျာပုံလမ်း ငါးလွှာ ။ ယောက်ဖက သုံးလွှာ လောက်ပဲတက်ရသေးသည် … ဟောဟဲ …ဟောဟဲ ဖြစ်နေလို့ သူ့ကိုစောင့်စောင့်ပြီးခေါ်ရသည်။ အပေါ်ရောက်တော့ ယောက်ဖ မောပြီးဖလက်ပြသွားသည်။ အခန်းထဲသွားနားနေသည် ။ ”မောင်လေးရေ ………. အထုတ်တွေဝိုင်းကူထားပါဦး ။ နင့်အကိုအထုတ်ကို နင့်အခန်းထဲထား ။ မမအထုတ်ကိုတော့ ဒီကိုယူလာခဲ့ ။ ”” မမက အကိုနဲ့တစ်ခန်းထဲအတူတူအိပ်တာမဟုတ်ဘူးလား” ” နင့်အကိုဆီကပိုးကူးမှာစိုးလို့ ခွဲအိပ်တာ တစ်နှစ်ကျော်လောက်ရှိပြီ။ သူကလဲ ဆေးပြင်းတွေသောက်ရတော့ ညညဆို တန်းပြီးအိပ်ပျော်တာပါပဲဟယ်။
လင်မယားကိစ္စလဲသိပ်မရှိတော့ပါဘူး။ ” အိမ်ထောင်ကျတာမှ နှစ်နှစ်လောက်ပဲရှိသေးသည်။ တစ်နှစ်ကျော်လောက်ခွဲအိပ်ရသော မမကိုလဲ သနားမိသည်။ သို့သော် ဘာစိတ်မှ မဖြစ်မိပေ။ ဒီလိုနဲ့ မနက်စောစောထတဲ့ သူ့အကျင့်ကြောင့် မနက်စောစောရေနွေးတည်၊ ထမင်းအိုးတစ်လုံးချက်ပြီး ဈေးသွားလိုက်သည်။ ဈေးကပြန်လာတော့ မမမွန်တစ်ယောက်ရေချိုးခန်းထဲက ထွက်လာတာနဲ့တန်းတိုးသည်။ရင်လျှားပေါ်မှာတဘက်လေးလွှား ထားသည်။ ”အော်……. မမမွန် နိုးနေပြီလား။ ကျွန်တော်တောင်ဈေးကပြန်လာပြီ ။ ကြက်သားနဲ့ အာလူးရယ် ၊ ကင်ပွန်းချဉ်ရွက်နဲ့ ပဒတ်စာလေးပဲချက်ပြီး ငပိရည်နဲ့ တို့စရာလေး တို့မလို့စီစဉ်ထားတယ်။” ဖြိုးညီတစ်ယောက်ရေ ပက်မဝင် စကားတွေကိုဖောဖောသီသီပင်ပြောမိသည်။
” ဒါနဲ့ မမမွန်မျက်နှာမကောင်းပါလား။ ညက အိပ်မပျော်လို့လား။ ဘာဖြစ်လို့လဲမမရဲ့။”သေချာမေးကြည့်တော့မှ.. ” ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။ညက မမမွန်ခြေဆစ်လက်ဆစ်တွေကိုက်လို့အိပ်လို့မရဘူးလေ။ မိုးအေးတော့ပိုဆိုးတာပေါ့။ ဆရာဝန်ကတော့ လေးဘက်နာလို့ပြောတာပဲ။ အဲဒါ မိုးအေးတိုင်းဖြစ်နေတော့ စိတ်ညစ်နေတာပါ။ ” ” ဒါများမမမွန်ရယ် ညထဲက ပြောပါလား ။ ကျွန်တော် ဆေးပေးပြီး ကုပေးမှာပေါ့။ ဘာလဲ ကိုယ့်မောင်လေးကို ကျောင်းမပြီးသေးဘူးဆိုပြီးမယုံဘူးလား။ ” ”လာ… ဒီမှာထိုင် ။ ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်။ အဲဒါ …………… လို့ခေါ်တယ် ။ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးသောက်ပေါ့။” ”နောက်တစ်ခါဖြစ်ရင်ကျွန်တော့်ကိုခေါ်လေ။ ” ”ကျွန်တော်မနက်စာပြင်ထားတယ်။ အကို့ကိုနှိုးလိုက်ဦးလေ။ တူတူစားရအောင်။” ”ရတယ်မောင်လေး သူကနေမြင့်မှထတာ ။ သူ့ကို နှိုးရင်လဲမကြိုက်ဘူး။ ”” မောင်လေးနဲ့ မမပဲအရင်စားထားနှင့်မယ် ။ နောက်မှချက်ပေါ့ ။
ဝီရိယကောင်းနေလိုက်တာနော်။”” ခဏလေး မမအဝတ်အစားသွားလဲလိုက်ဦးမယ်။ ”ပြောရင်းဆိုရင်းထွက်သွားသော မမမွန်ရဲ့ နောက်ပိုင်းကို တစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်မိသည်။ တင်သားတွေက ထွားပြီး အယ်နေသည်။ ကာမမှုလဲကောင်းကောင်းမပြုဖြစ်တော့ ကျမသွား။ ဒီကြားထဲ အိမ်အလုပ်တွေကို သူတစ်ယောက်ထဲ ဒိုင်ခံလုပ်ရတော့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သလိုဖြစ်ပြီး ရင်သား ၊ တင်သားတွေက ကျစ်လစ်နေသည်။ နေ့လည် အိမ်နောက်ဖေးမှာဟင်းချက်ရင်း မမမွန်နောက်မှာရောက်တာမသိပဲ လှည့်လိုက်တော့ ရင်ချင်းအပ်သလိုဖြစ်သွားပြီး မမမွန်ရဲ့ နို့ကြီးတွေနဲ့ ပွတ်မိသွားသည်။ အိစက် နေသောအတွေ့အထိကြောင့် ကတုန်ကရင်တောင်ဖြစ်သွားသည်။ မနဲစိတ်နှစ်ပြီး ဟင်းအိုးထဲအာရုံစိုက်လိုက်ရသည်။ နေ့လည်စာ ဖြိုးညီလက်ရာကို ချီးကျူးကြသည်။ ဖြိုးညီလဲ နေ့လည်စာစားပြီး သူ့အခန်းထဲဝင်ကာတစ်ရေးတမောအိပ်လိုက်သည်။
ညနေစောင်းလောက်နိုးတော့ လေ့ကျင်ခန်းလုပ်သည့် အနေနဲ့ ဒိုက်ထိုးပြီး ဘောင်းဘီတိုနှင့်ပင် ရေချိုးခန်းထဲဝင်ပြီး ရေပန်းအောက်မှာအားရပါးရရေချိုးလိုက်သည်။ ညနေစာစား ၊ ပြီးတော့ ယောက်ဖနဲ့ဘောလုံးပွဲကြည့် ။ ပထမပိုင်းပြီးတော့ ယောက်ဖက မကြည့်နိုင်တော့ ။ အားနည်းတာရော ၊ အိပ်ရေးပျက်မခံနိုင်တာရောကြောင့် အိပ်တော့မည်ပြောသည်။ မမမွန်က အိပ်ယာခင်းပေး စောင်ခြုံပေးသည်။ ယောက်ဖအိပ်သွားပြီးမှ ပြန်ထွက်လာသည်။ ”ငါ့မောင်လေး မအိပ်သေးဘူးလား။ မမတော့ အိပ်တော့မယ် ။”” ရတယ် မမ ကျွန်တော်က နှစ်ပွဲဆက်ကြည့်မှာ ။ ၉ခွဲပွဲပြီးရင် ၁၂နာရီပွဲလာဦးမှာဆိုတော့ ၂နာရီကျော်လောက်မှ အိပ်ဖြစ်မှာ ။ ဂွတ်နိုက်နော် မမ။ဒုတိယပွဲကြည့်ရင်း ပထမပိုင်းအပြီး ခဏနားတော့ ဘောလုံးဂျာနယ်ဖတ်ဖို့လိုက်ရှာမှ ဂျာနယ်က ခြင်းတောင်းထဲထည့်လိုက်မိမှန်းသိသည်။ဒီကိုလာတုန်းက အထုတ်မဆန့်တာ နဲ့ ခြင်းတောင်းထဲထည့်ထားတာ ။ ခြင်းတောင်းက မမမွန်အခန်းထဲမှာ ။ မထူးပါဘူးလေ ဘယ်သူမှမ မဟုတ်တာ ကိုယ့်အစ်မပဲ ဆိုပြီး အခန်းထဲဝင်လိုက်သည်။
နိုးသွားမှာကြောက်လို့ ခြေဖွနင်းပြီး အခန်းထဲဝင် ၊ ကုတင်အောက်က ခြင်းတောင်းကို ငုံ့ယူနေစဉ်”မောင်လေး ဘောလုံးပွဲပြီးပြီလား။”” အော် မမ မအိပ်သေးပဲကို ၊ မပြီးသေးဘူးမမ ။ ပထမပိုင်းပြီးပြီ ပျင်းနေလို့ ဘောလုံးဂျာနယ်ဖတ်မလို့ဟာဘောလုံးဂျာနယ်ကခြင်းတောင်းထဲပါသွားလို့ လာယူတာ။”” မမ မအိပ်သေးဘူးလား ။”” ဘာလို့မအိပ်တာလဲ ။အဆစ်အမြစ်တွေကိုက်ပြန်ပြီငါ့မောင်ရယ်။ လက်ဆစ်ခြေဆစ်တွေကိုက်နေတာ။” ”အော်….. ဒါလေးများမမရယ် ။ ကျွန်တော့်ဆီမှာဆေးပါလာတယ် ခဏစောင့်။ ”အခန်းထဲပြန်ပြီး အသင့်ရှိနေတဲ့ အစာအိမ်မထိတဲ့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးကိုပဲ …… လေးနဲ့တွဲပြီးပေးလိုက်သည်။ဆေးတိုက်ပြီးတော့ ”မမ..လက်ဆစ်တွေကိုက်နေတယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်နှိပ်ပေးရဦးမလား။””အင်း နှိပ်ပေးလေ ။ ကောင်းတာပေါ့ ငါ့မောင်ရယ်။ မမကတော့ အရမ်းကိုက်တာပဲသိတယ်။ ”ဖြိုးညီ တစ်ယောက်မမမွန်ရဲ့ လက်ဆစ်တွေကိုစိတ်ပါလက်ပါနဲ့ နှိပ်ပေးနေမိသည်။ လက်ချောင်းလေးတွေက သွယ်လျှနေသည်။ ဖော့ဖယောင်းလိုနူးညံ့နေသည်။ ကုတင်က နံရံကပ်ထားတာဆိုတော့ နံရံဘက်နှင့် ဝေးသည့် ဒီဘက်လက်ကို နှိပ်ပေးတုန်းက ဘာမှမဖြစ်။
ဟိုဘက်လက်ကို ကျတော့ မမက သူ့ရင်ဘတ်ပေါ်တင်ပေးထားသည်။ လက်ကိုနှိပ်ရင်း တစ်ချက်တစ်ချက်ရင်သားကြီးတွေကို ထိမိတော့ ။ အိစက်သည့်အထိအတွေ့ကြောင့် အောက်ကညီတော်မောင်က ခေါင်းထောင်ချင်လာသည်။ ပုဆိုးပဲဝတ်ထားတာရယ် ။ ညဘက်အိပ်ခါနီးဆိုတော့အတွင်းခံဘောင်းဘီကဝတ်မထား တော့ ပုဆိုးအောက်မှာငေါထွက်နေသည်။ မမွန်ကတော့ မသိလောက်။ ခဏကြာတော့ ”ရပြီငါ့မောင် လက်ကတော့ တော်တော်လေးသက်သာသွားပြီ။ ခြေဆစ်လေးတွေနှိပ်ပေးဦး။ ဒူးခေါင်းရောပဲ။”ဖြိုးညီ ခြေချောင်းလေးတွေကို ညင်ညင်သာသာ နှိပ်ပေးသည်။ ကော့လိုက် ကုတ်လိုက်ချိုးပေးသည်။ အဆစ်လေး တွေပေါ်မှာလက်နဲ့ဖိပေးသည်ခြေရင်းကနေအပေါ်ကိုမော့ကြည့် တော့အောက်ခံမဝတ်ထားတဲ့ညဝတ်အကီင်္ျပေါ်မှာနို့သီးခေါင်း လေးတွေကိုမြင်လိုက်ရတော့အာခေါင်တွေတောင်ခြောက်လာ သည်။
ခဏနေတော့ မမက အပေါ်ကိုဆွဲတင်ပြီး ” ဒူးခေါင်းလေးပဲနောက်ဆုံးနှိပ်ပေးတော့ ငါ့မောင်ရေ။ မောင်လေးလဲတော်တော်ညောင်းနေတော့မယ်။ မမ လဲဆေးသောက်လိုက်တော့ တော်တော်ကောင်းသွားတယ်။”ဒူးခေါင်းကို နှိပ်ပေးရင်း ခြေသလုံးသားဖြူဖြူလေးတွေကိုကြည့်ပြီး စိတ်မထိန်းနိုင်တော့။ ထမိန်ကို အသာဆွဲလှန်ပြီး အဖုတ်ကြီးကို ကုန်းလျက်လိုက်သည်။” အာ…… ငါ့မောင် ဘာလုပ်တာလဲကွယ်။ မတော်ပါဘူး။”မတော်ပါဘူးသာပြောနေတာ အဖုတ်ထဲမှာ အရည်တွေရွဲနေသည်။ အရည်ကြည်လေးတွေကိုလျှာကြီး နဲ့ တစ်ခါထဲ သိမ်းကြုံး လျက်လိုက်သည်။အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသား နှစ်လွှာကို နှုတ်ခမ်းနဲ့ စုငုံပြီး ချိုချဉ်စုတ်သလို ဆွဲစုတ်လိုက်သည်။” ရှုး……….. အား………….ကောင်းလိုက်တာငါ့မောင်ရယ်။ ဘယ်လိုများလုပ်လိုက်တာလဲ။ ” မမမွန်တစ်ယောက် ကော့ပြန်နေသည် ။ ခါးကော့ပြီး အဖုတ်ကြီးကို ကော့ပေးသည်။
အဖုတ်ကြီးကို ဖြိုးညီမျက်နှာနှင့်ကပ်ပေးသည်။ အစေ့လေးကို ဆွဲစုတ်ပေးသည်။ အဖုတ်နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကို ဖြဲပြီး ပန်းရောင် အတွင်းနံရံထဲကို လျှာကိုခေါက်ကာပို့လွှတ်လိုက်သည်။ ” အ…..အ……. နာနာလေးလျှက်….. ကောင်းလိုက်တာ…. ”အစေ့ကို စုတ်လိုက်၊ လျှာနဲ့ထိုးမွှေလိုက်၊ အဖုတ်နှုတ်ခမ်းနဲ့ ဖြိုးညီနှုတ်ခမ်း တေ့ပြီးစုတ်လိုက် လုပ်နေတုန်း မမမွန် လက်နှစ်ဖက်က ဖြိုးညီလက်နှစ်ဖက်ကိုယူပြီး သူ့နို့အုံပေါ်မှာတင်ပေးသည်။ တင်းအိပြီးနူးညံ့နေတဲ့ နို့ကြီးနှစ်လုံးကို ညဝတ်အကျီင်္ပေါ်ကပဲ နာနာနယ်မိသည်။” ညှစ် နာနာ ညှစ် ကောင်းနေပြီ ။ ကောင်းလိုက်တာ။ အောက်ကလဲ ပြီးတော့မယ်..။ ””အား …… အား……….. ပြီးပြီ ပြီးပြီ …။ ”ခါးလေးကိုကော့ ပြီး အရည်တွေ ဒလဟော ထွက်ကာ ပြီးသွားသည်။ ဖြိုးညီမျက်နှာမှာလဲ အရည်တွေလူးနေသည်။ ထွက်လာတဲ့ အရည်တွေတစ်ခါထဲမျိုချ လိုက်သည်။ မမမွန်အရည်က အချဉ်ဓာတ်မများ ။ အနည်းငယ် ငန်သည့်ဘက်ကဲသည်။ သိပ်မချဉ်ဘူးဆိုတော့ အက်ဆစ်ဓာတ်နည်းတယ် ။ PH နိမ့်မှာပေါ့ ။ ဖြိုးညီ စိတ်ထဲကပင် စောက်ရည်ကို ဓာတ်ခွဲကြည့်မိသည်။စိတ်ကူးနေလို့ မပြီးသေး ။
အလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရဦးမယ်ဆိုပြီး ပုဆိုးကိုတစ်ခါထဲ ဆွဲချွတ်လိုက်သည်။ အောက်က စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ ညီတောင်မောင်က ဘွားကနဲ ထွက်လာသည်။ မမမွန်ကတော့ လျှာနဲ့တင် တစ်ချီပြီးသွားလို့ မျက်လုံးလေးမှေးနေသည်။ ဖြိုးညီ ဒူးထောက်ကာ ထောက်ကာနဲ့ ခေါင်းရင်းဘက်ကိုသွားလိုက်သည်။ ညီတော်မောင်ကို ပါးစပ်နားလေးကပ်ပြီး ။ မမမွန်…. လို့ညင်ညင်သာသာခေါ်လိုက်သည်။ မမမွန် မျက်လုံးဖွင့် ကြည့်လိုက်တော့ ပါးစပ်နားမှာ တရမ်းရမ်းဖြစ်နေတဲ့ ညီတော်မောင်ကိုတွေ့ပြီး မျက်လုံးလေးဝိုင်းသွားသည်။” အာ …… အကြီးကြီးပဲ ။ နင့်အကိုဟာ အဲလောက်မကြီးဘူး။”” ကျွန်တော်က အဆောင်မှာပျင်းနေတာနဲ့ အားအားရှိ ပန့်ဆွဲထားတာလေ။ အဲဒါကြောင့်ပါ။ ””ကျွန်တော့်ကိုလဲ တစ်လှည့်လုပ်ပေးပါဦးမမရယ်။ ”စကားဆုံးတော့ လက်လေးတစ်ဖက်ကိုကြွပြီးညီတော်မောင်ကိုလှမ်းကိုင်လိုက်သည်။ ခေါင်းလေးကိုကြွပြီး ဒစ်ထိပ်ဖျားလေးကိုငုံသည်။
ဒစ်တစ်ခုလုံးပါးစပ်ထဲတွင်ထည့်ပြီး လျှာလေးနဲ့လှည့်ပတ်ကစားသည်။ ဒစ်အနားသားလေးတွေကို လျက်သည်။ နောက် ခေါင်းကိုကြွပြီး လီးတစ်ဝက်လောက်ထိရောက်အောင်ငုံပြီး ကြွကာကြွကာနဲ့ မှုတ်ပေးသည်။ လီးပတ်လည်ကို လျှာလေးနဲ့ ရေခဲချောင်းလျက်သလို လျက်သည်။ အရမ်းကောင်းတာကြောင့် ဖြိုးညီ တစ်ယောက်ပြီးချင်ချင်ပင်ဖြစ်သွားသည်။” ကဲ မမ ရပြီ။ လုပ်တော့မယ် ။””ပေါင်လေးကိုနည်းနည်းကားပြီး ဒူးထောင်ပေးနော်။”ဖြိုးညီ ထောင်ထားတဲ့ ဒူးနှစ်လုံးကြားတွင် ဒူးထောက်ပြီးနေရာယူလိုက်သည်။ အဖုတ်ဝ တွင်လီးကိုတေ့ပြီးချက်ချင်းမထည့်သေးပဲ အဖုတ်အကွဲကြောင်းတစ်လျှောက်ပွတ်ပေးလိုက်တော့ မမမွန်တစ်ယောက်ကော့တက်သွားသည်။” အ…… လုပ်ပါတော့ ငါ့မောင်ရယ် ။ မမစိတ်တွေပြန်ကြွလာပြန်ပြီ။’မမမွန် ဒါဆိုထည့်လိုက်တော့မယ်နော်။အင်းထည့်လိုက်တော့။ဖြိုးညီ သူ့လီးကြီးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းထိုးထည့်လိုက်သည်။ မလုပ်တာကြာတော့ အပေါက်က တော်တော်ကျပ်နေသည်။
ဖြိုးညီ အားနည်းနည်းစိုက်ပြီး ဖိထိုးလိုက်တော့ မမမွန်ဆီမှ ညည်းသံ နည်းနည်းထွက်လာသည်။”မောင်လေး ဖြည်းဖြည်းလုပ်ပါနော် ။ မမကမလုပ်ဖြစ်တာကြာပြီ။””ဟုတ်ကဲ့ မမ။ ”ဒစ်ဝင်ပြီးသွားတော့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဆက်ထိုးထည့်လိုက်တာ တစ်ဝက်လောက်ဝင်သွားသည်။ အပြင်မှာသုံးလက်မလောက်သာကျန်တော့သည်။ ကျန်တဲ့ သုံးလက်မကို အဆုံးထိဆောင့်ထည့်လိုက်သည်။”ဒုတ်……. လီးထိပ် နဲ့ သားအိမ်ခေါင်းသွားဆောင့်သည်။” ”အား ……. နာတယ် မောင်လေး ဖြည်းဖြည်းလုပ်။” ”ဟုတ် …… မမ”ဖြိုးညီ တစ်ဝက်လောက်ပြန်ထည့်လိုက် ထုတ်လိုက်နဲ့ အသားကျသွားအောင် ဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်နေမိသည်။ ၁၀ချက်လောက်လုပ်ပြီးသွားတော့ အသွင်းအထုတ်ကို နည်းနည်းအရှိန်မြင့်လိုက်သည”အ…. အ…… ကောင်းတယ် မောင်လေး လုပ်လုပ်”” ဗြွတ် ….ဗြွတ် ….. ဖွတ် ….ဖွတ် ……. ဖပ် ………. ဖပ်……….”အဖုတ်ထဲက အရည်တွေနဲ့ လီးအသွင်းအထုတ်လုပ်တဲ့ အသံတွေ ဆူညံနေသည်။တော်သေးတာပေါ့။ တိုက်ခန်းက အသံလုံလို့ ။
ဖြိုးညီစိတ်ထဲက တွေးမိသည်။ပြီးတော့ ကိုယ့် အစ်မ တစ်ဝမ်းကွဲတစ်ယောက်ကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် လိုးနေရပါလားဆိုတဲ့ အသိက အသစ်အဆန်းတစ်မျိုး ဖြစ်စေသည်။” ဖပ် ……. ဖပ် …………. ဖပ် …………ဖပ်………….”ဖြိုးညီ ဥ နဲ့ မမမွန်ဖင်နဲ့ရိုက်သံတွေဆူညံ နေသည်။အဖုတ်ကတင်းကျပ်စီးပိုင်နေပြီး လီးကိုသားရေကွင်းနဲ့ ဆုတ်ညှစ်ထားသလို ခံစားရသည်။စိတ်ထဲတော်တော်ကောင်းလာသောကြောင့် နို့ကိုဆွဲရင်းနာနာဆောင့်လိုးလိုက်တာ ကြာကြာ မလိုးလိုက်ရ ခဏနဲ့ပြီးချင်လာသည်။ ကွန်ဒုံးလဲမပါသောကြောင့် လီးကိုအပြင်ကိုပဲဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး သုက်ရည်တွေကို ဗိုက်ပေါ်ပဲပန်းချလိုက်သည်။” အား……….. ရှုး……….. ကောင်းလိုက်တာမမရယ်…..” ဖြိုးညီ မမမွန်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းသားလေးကို မြတ်မြတ်နိုးနိုးပဲ နမ်းလိုက်သည်။ခဏနေတော့ မမမွန်ဆီကမွတ်သိပ်သော အနမ်းတွေ ပြန်လည်ရရှိသည်။
” ဒီလိုမျိုးမနေရတာကြာပြီငါ့မောင်ရယ်……….. အခုလိုလုပ်မိတာ မကောင်းပေမဲ့ မမရဲ့ ဆန္ဒ ပြည့်ဝအောင်လုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ။””မမဆန္ဒပြည့်ပေမဲ့ ကျွန်တော့် ဆန္ဒ မပြည့်သေးဘူးမမရယ် ။ ကျွန်တော်လုပ်လို့မဝသေးဘူး။” ”ဟုတ်လား ….. လုပ်ဦးမလို့….. လား…”စကားဆုံးခင်မျက်လုံးကပေါင်ကြားထဲကလီးကြီးကိုတွေ့ ပြီး စကားတစ်ပိုင်းတစ်စနဲ့ပင်ရပ်သွားသည်။ ” အို……. တောင်နေတုန်းပဲ။ မင်းကလဲကွာ ။”” လုပ်ပါမမရယ် ။ လာ …. လေးဘက်ထောက်ပြီးဖင်ကုန်းပေး။”ကိုချမ်းသာနဲ့ တုန်းက ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ လုပ်ခဲ့ဖူးသောကြောင့် သိပ်ပြဿနာမရှိ ။ ဖြိုးညီပြောတဲ့ပုံစံအတိုင်းပင် သေချာကုန်းပေးလိုက်သည်။ခါးကိုကော့ပြီးဖင်ကိုသေချာကုန်းပေးထားသောကြောင့် ကြီးမားဖြူဖွေးသည့် ဖင်ကြီး နှစ်လုံးအောက်က အဖုတ်ကြီးက ပြူးထွက်လာသည်။ဖင်ကြားထဲပြူးထွက်နေသည့် အဖုတ်ကြီးကိုကြည့်ရင်းဖြိုးညီတစ်ယောက်စိတ်တွေဆူဝေလာပြီး အဖုတ်ကြီးကို သကြားလုံးစုတ်သလို ပြွတ် ခနဲ ငုံပြီးကုန်းစုတ်လိုက်သည်။
အား………. ကောင်းတယ် ……. ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး စုတ်ပေး”သုံးလေးချက်လောက် စုတ်ပြီးတော့ ဖြိုးညီ သူ့လီးကို မမမွန်အဖုတ်ဝမှာတေ့ပြီး လက်တစ်ဖက်က ဖင်ကိုကိုင် နောက်တစ်ဖက်ကခါးကိုကိုင်ပြီး တစ်ခါထဲ တစ်ဆုံးသွင်းလိုက်သည်။လီးကရှည်သည့်အပြင် ဖင်ကုန်းထားသောကြောင့် တစ်ခါထဲနဲ့ သားအိမ်ခေါင်းကိုသွား တိုက်သည်။”ဒုတ် ………. အ ……… ” မမမွန် ဆီကအသံထွက်လာသည်။”မောင်လေး နာနာဆောင့်တော့ ။ မမမွန်ခံချင်နေပြီ။ အတွင်းထဲထိမဆောင့်နဲ့ ဗိုက်ထဲကအောင့်တယ်။” ” အပြင်နားတင်နာနာဆောင့် ။”ဖြိုးညီလဲ မမမွန်ရဲ့ အယ်နေတဲ့ဖင်ကြီးနှစ်လုံးကို အကျအနကိုင်ပြီး နာနာပင်ဆောင့်လိုးတော့သည်။ဗွတ် ……. ဗွတ် ………. ဘွတ် ……. ဘွတ်……………..အား…………ကောင်းတယ် ……. မောင်လေးဆောင့် …. သြော် ….. သောက်လေ သောက်လေ ငတ်မပြေပေါ့ အားလုံးဘဲ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ …. ပြီးပါပြီ။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ငတျမပွသေော